🥇 सुरक्षित र भरपर्दो VPN: २०२२ को शीर्ष १० VPN
प्रत्येक पटक तिनीहरू हुन् अधिक प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूको सुरक्षाको बारेमा चिन्तित छन् (र त्यसैले VPN मा रुचि छ) बढ्दो साइबर खतराहरू र व्यापक जासुसीका घटनाहरू जुन मिडिया कभरेज बनेको छ। अझ महामारीको समयमा, जब SARS-CoV-2 ले धेरैलाई टेलिकम्युट गर्न बाध्य पार्छ, जसको मतलब घर नेटवर्कहरूबाट संवेदनशील वा निजी कम्पनी डेटा ह्यान्डल गर्ने हो जसमा व्यवसाय सुरक्षा उपायहरू नहुन सक्छ।
VPN ले तपाइँलाई तपाइँको अफिस वा घर जडानहरूको लागि सुरक्षाको अतिरिक्त तह मात्र प्रदान गर्न सक्दैन, यसले तपाइँलाई अन्य तरिकाहरूमा पनि मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाईले आफ्नो आईपी को उत्पत्ति तपाईको इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, सक्षम हुनको लागि मूल देश छनौट गर्न सक्षम हुनु। पहुँच सेवाहरू जुन सीमित वा प्रतिबन्धित छन् तपाईंको मूल देशको लागि। केहि जसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्दछ, विशेष गरी सामग्री सेवाहरू, VPN मा।
शीर्ष 10 VPN हरू
यस बीच सबै भन्दा राम्रो vpn सेवाहरू हामी यो Top10 सिफारिस गर्छौं:
VPN कोसिस गर्नुहोस्
आईपी ​​59 देशहरूबाट
6 एक साथ उपकरणहरू
यसको प्रचार को लागी बाहिर खडा
आईपी ​​90 देशहरूबाट
7 एक साथ उपकरणहरू
आईपी ​​61 देशहरूबाट
यसको मूल्यको लागि बाहिर खडा छ
आईपी ​​94 देशहरूबाट
5 एक साथ उपकरणहरू
यसको सेवाको गुणस्तरको लागि बाहिर खडा छ
आईपी ​​80 देशहरूबाट
यसको गति को लागी प्रख्यात
आईपी ​​22 देशहरूबाट
यसको प्राविधिक सेवाको लागि बाहिर खडा छ
मेरो गधा लुकाउनुहोस्!
आईपी ​​190 देशहरूबाट
10 एक साथ उपकरणहरू
P2P र Torrent को लागी धेरै राम्रो
आईपी ​​46 देशहरूबाट
Netflix को साथ प्रयोगको लागि आदर्श
आईपी ​​56 देशहरूबाट
परिवारहरूको लागि राम्रो विकल्प
VPN बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा
VPN भाडामा लिनु अघि तपाईंले जान्नु आवश्यक छ विवरणहरूको एक शृङ्खला तपाईको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त छनौट गर्न र तपाईलाई वास्तवमै VPN सेवा चाहिन्छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्न सक्षम हुन।
una VPN (Virtual निजी नेटवर्क), वा भर्चुअल निजी नेटवर्क, मूलतया एक सेवा हो जसले तपाईंलाई इन्टरनेट जस्तै नेटवर्कमा सुरक्षित तरिकामा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। यो गर्नको लागि, नेटवर्क ट्राफिकको उत्पत्तिको एक अस्पष्टता प्रयोग गरिन्छ, यसले तपाइँको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) द्वारा प्रदान गरिएको मूल भन्दा फरक IP प्रदान गर्दछ।
साथै, एक VPN ले उत्पन्न गर्नेछ "टनेल" एन्क्रिप्टेड ट्राफिकको साथ जडान, अर्थात्, सबै आगमन र बहिर्गमन डेटा ट्राफिकलाई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदमद्वारा सुरक्षित गरिनेछ ताकि तेस्रो पक्षहरूले स्निफरहरू (नेटवर्क प्याकेट स्निफरहरू) जस्तै MitM (Man in the Middle) प्रयोग गरेर आक्रमणहरू मार्फत तिनीहरूलाई सादा पाठमा रोक्न सक्दैनन्, र रहन्छन्। केहि सेवाहरू र प्रदायकहरूबाट लुकेको छ जसले तपाइँको ट्राफिक कब्जा गर्न र भण्डार गर्न सक्छ।
माथिका सबैमा केही अतिरिक्त "साइड इफेक्टहरू" छन्। उदाहरणका लागि, आईपी परिवर्तन गरेर, यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रतिबन्धित वा सीमित सामग्री पहुँच गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईंले पक्कै पनि अर्को देशको स्ट्रिमिङ च्यानल हेर्ने प्रयास गर्नुभएको छ र यसले तपाईंलाई यो सेवा त्यो देशका प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ भनी जानकारी दिने सन्देश देखाउँछ। ठीक छ, यस प्रकारको प्रतिबन्धलाई VPN को साथ बेवास्ता गर्न सकिन्छ ...
नि: शुल्क बनाम भुक्तान
त्यहाँ केहि छन् पूर्ण रूपमा नि: शुल्क VPN सेवाहरू, र सीमित नि:शुल्क सेवाहरू प्रस्ताव गर्ने अन्य भुक्तानीहरू। जब तपाइँ VPN प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहुन्छ, यो किनभने तपाइँलाई अधिकतम सुरक्षा वा तपाइँको क्षेत्रमा निश्चित प्रतिबन्धित सेवाहरूमा पहुँच चाहिन्छ। र यो तपाईंले नि: शुल्क सेवाहरू सुम्पनु पर्ने कुरा होइन।
एउटा कारण यो हो कि नि:शुल्क सेवाहरूमा कम स्तरको सुरक्षा हुन्छ तर, सबै भन्दा माथि, किनभने तिनीहरूसँग छ ट्राफिक सीमाहरू दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक। यसले तपाइँलाई नि: शुल्कको गहन प्रयोग गर्न सक्षम हुनबाट रोक्नेछ र धेरै डाटा खपत गर्ने भिडियो सेवाहरू स्ट्रिम गर्न सम्भव छैन (विशेष गरी यदि तिनीहरू HD वा 4K छन्)। र के खराब छ, नि: शुल्क VPN सेवाहरूले तपाईंलाई धेरै अवस्थामा स्ट्रिमिङ सेवाहरूसँग काम गर्न अनुमति दिँदैन।
तसर्थ, जब तपाइँ नि: शुल्क VPN सेवाहरू मध्ये एक पहुँच गर्नुहुन्छ तपाईं निराश हुनुहुनेछ र तपाईंले वास्तवमै चाहेको कुरा प्राप्त नगरेर सशुल्क सेवामा समाप्त हुन्छ। थप रूपमा, सशुल्क सेवाहरू महँगो हुनुपर्दैन, यसबाट टाढा, त्यहाँ धेरै रसदार प्रस्तावहरू छन् जुन प्रति महिना केही यूरोको लागि तपाईंलाई प्रिमियम सेवाहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
र याद गर्नुहोस् तिनीहरू के भन्छन्, जब केहि नि: शुल्क हुन्छ, उत्पादन तपाईं हो। त्यो हो, केही नि:शुल्क सेवाहरूले तपाइँको गतिविधिलाई निगरानी गर्न जाँदैछन् र यसलाई तेस्रो पक्षहरूलाई बेच्न, तपाइँको प्राथमिकता अनुसार विज्ञापनहरू देखाउन वा यसको लागि कुनै प्रकारको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। तसर्थ, तिनीहरूले नि: शुल्क सेवा प्रस्ताव गर्छन्, तर तिनीहरूले अर्को तिर नाफा कमाउँछन् ...
अन्य सेवाहरू पनि हुन सक्छ ब्यान्डविथ बेच्नुहोस् तपाईंको भुक्तानी सेवाका अन्य ग्राहकहरूलाई। त्यो हो, तिनीहरूले तपाइँको स्रोतहरूको अंश प्रयोग गर्दछ तिनीहरूलाई प्रिमियम खाता भएका प्रयोगकर्ताहरूमा स्थानान्तरण गर्न।
तेस्रो-पार्टी VPN वा तपाईंको आफ्नै?
यो सत्य हो कि तपाईं सक्नुहुन्छ आफ्नो VPN सिर्जना गर्नुहोस् प्रयोग गर्दै GNU/Linux र OpenVPN भएको सर्भर (वा अन्य अपरेटिङ सिस्टम र समान सफ्टवेयर)। तर यस प्रकारको VPN तपाईको नेटवर्क ब्यान्डविथ द्वारा गतिको सर्तमा अलि बढी सीमित हुनेछ र तपाईले कडाई र प्रशासन आफैं गर्नुपर्नेछ, र त्यसमा सर्भरमा उत्पन्न हुन सक्ने प्राविधिक समस्याहरूको समाधान पनि समावेश छ।
यो बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताहरूको लागि विकल्प होइन, धेरै व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि होइन। त्यसैले, सबै भन्दा सहज तेस्रो पक्ष VPN सेवा सम्झौता गर्नुहोस् र यसले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको आनन्द लिनुहोस्। यस अवस्थामा, तपाईले ग्राहकलाई स्थापना गर्ने र पहिलो दिनबाट सेवाको आनन्द लिन सुरु गर्ने बारे मात्र चिन्ता गर्नुपर्नेछ।
के यो VPN राउटर किन्नको लागि राम्रो विकल्प हो?
यो सत्य हो कि त्यहाँ केहि राउटरहरू, वा राउटरहरू पनि छन् तिनीहरू पहिले नै समावेश गरिएको VPN प्रस्ताव गर्छन्। तिनीहरू प्रीमियम राउटरहरू हुन् जुन सामान्यतया औसत भन्दा अलि बढी खर्च हुन्छ, तर तिनीहरूले धेरै रोचक फाइदाहरू र अतिरिक्त सेवाहरूको श्रृंखला प्रस्ताव गर्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले केही उदाहरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जस्तै:
TP-LINK Gigabit बहु-WAN...
Linkysys WRT 3200 ACM
Linkysys WRT32X गेमि।
यद्यपि यो केहि अवस्थामा एक महान विकल्प हो, तपाईं होसियार हुनुपर्छ केहि सस्तो VPN राउटर मोडेलहरु संग। तिनीहरूमध्ये केहीले तिनीहरूसँग यस प्रकारको सेवा रहेको संकेत गर्छन् तर यसले ग्राहकलाई मात्र जनाउँछ, र तिनीहरूसँग सर्भरद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको कमी छ। त्यसकारण, तपाईंले यसलाई कार्यात्मक बनाउन तेस्रो-पक्ष सेवा पनि भाडामा लिनुपर्छ।
ताकि तपाईलाई कुनै समस्या नहोस्, हामीले उत्तम VPN राउटरहरूको संकलन गरेका छौं जुन तपाईले निम्न बटन थिचेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ:
VPN राउटरहरू हेर्नुहोस्
यसका लागि ध्यान दिनुहोस्! धेरैले यी राउटरहरू मध्ये एउटा किन्छन् र मनमा शान्ति पाउँछन्, तर तिनीहरूको डाटा अझै पनि असुरक्षित छ।
VPN प्रयोग गर्ने फाइदाहरू
कुनै पनि अन्य उत्पादन र सेवा जस्तै, एक VPN यसको फाइदा र विपक्ष छ। तर पक्कै पनि फाइदाहरू तपाईंलाई उसलाई भाडामा लिन मनाउन धेरै शक्तिशाली छन्:
नेटवर्क ट्राफिकको गुप्तिकरण ताकि तपाईंको डाटा सादा पाठमा स्थानान्तरण नगरियोस् र गोपनीयताको सम्मान गर्न (प्रेषक र प्रापक बीच हस्तान्तरण गरिएको जानकारी अनुमति बिना तेस्रो पक्षहरूले पहुँच गर्न सक्दैन)। र यसमा सम्पूर्ण ट्राफिक समावेश छ, र प्रोक्सी सर्भरहरू जस्तो होइन जुन तपाइँ वेब ब्राउजर वा निश्चित विशेष एपहरूको लागि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाईंको उपकरणहरूबाट सबै ट्राफिकहरू सुरक्षित हुनेछन्।
ग्रेटर गोपनीयता र गुमनामता। इन्क्रिप्शनको लागि मात्र होइन, IP को उत्पत्ति लुकाउनको लागि पनि।
तपाईंको भौगोलिक क्षेत्रको बाइपास प्रतिबन्धहरू अन्य देशहरूबाट आईपी प्रयोग गर्दै जसको लागि त्यो सेवा बिना सीमा सञ्चालन छ।
तपाईंको इन्टरनेट प्रदायक वा ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) तपाईंले आफ्नो जडानको प्रयोग थाहा पाउन सक्षम हुने छैन। VPN बिना यो तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको पृष्ठहरू थाहा पाउन सक्षम हुनेछ, यदि तपाईंले पाइरेटेड सामग्री डाउनलोड गर्नुभयो भने, आदि। यो यस्तो छ किनकि सबै ट्राफिक तिनीहरूको सर्भर मार्फत जान्छ र यसको रेकर्ड रहनेछ। थप रूपमा, कानूनले ISP लाई धेरै वर्षसम्म यस्तो डाटा भण्डारण गर्न आवश्यक छ। यो सबै डाटा बेच्न वा विज्ञापन कम्पनीहरू, सरकारी एजेन्सीहरू, इत्यादिमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
डाटा अखण्डता, ताकि जब तिनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा आइपुग्छन् तिनीहरू उही हुन् जुन मूलबाट छोडेका थिए। अर्थात्, तिनीहरू बाटोमा परिवर्तन हुँदैनन्।
एक VPN धेरै सरल छ, र कहिलेकाहीँ यसले यसलाई सुरु गर्न वा रोक्नको लागि बटन थिच्नु मात्र समावेश गर्दछ। यसको सट्टा, अन्य वैकल्पिक सेवाहरू जस्तै प्रोक्सी सर्भरहरू, र अन्य विभिन्न सुरक्षा उपायहरू, थप जटिलताको अर्थ हुन सक्छ।
सुरक्षित गर्दै। यद्यपि यसको मूल्य छ, यो नेटवर्क सुरक्षित गर्न सक्ने सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई अन्य सेवाहरू वा भुक्तानीहरू भन्दा धेरै कम छ।
VPN को बेफाइदाहरू
पक्कै पनि एक VPN छैन खराब पोइन्टहरू धेरै उल्लेखनीय। यसको विरुद्ध कार्य गर्ने दुईवटा बुँदालाई मात्र हाइलाइट गर्न सकिन्छ:
मूल्य: यद्यपि त्यहाँ नि: शुल्क छन्, मैले पहिले नै टिप्पणी गरेको छु कि तिनीहरू सबैभन्दा उपयुक्त छैनन्। त्यसकारण, राम्रो VPN हुनको लागि तपाईंले तिर्नुपर्छ। यद्यपि, तिनीहरू उच्च मूल्यहरू छैनन् र धेरै मानिसहरूको लागि अनुमति छ। VPN को साथ राउटरको साथ तपाईले यी शुल्कहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ ...
जडान गति: जाहिर छ, डाटा इन्क्रिप्ट गर्दा, यो एन्क्रिप्टेड र डिक्रिप्ट गरिएको हुनुपर्छ ताकि तपाईं यसलाई VPN नभएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो, यो तपाईलाई पारदर्शी भए पनि, तर यसले गति घटाउने अतिरिक्त भारलाई मान्दछ। यदि तपाईंसँग द्रुत ADSL, फाइबर अप्टिक, वा 4G/5G लाइन छ भने, यो धेरै समस्या हुनेछैन। यो ढिलो जडानहरूको लागि मात्र हानिकारक हुन सक्छ (वा जब तपाइँसँग कुनै प्रकारको डेटा सीमा हुन्छ र यसले तपाइँलाई बाँकी महिनाको लागि सुस्त बनाउँछ)।
मलाई VPN किन चाहिन्छ?
NordVPN कोसिस गर्नुहोस्
VPN हुनुले तपाईको विशेष केसमा कुनै अर्थ राख्छ भने तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सिद्धान्तमा, गोपनीयता र सुरक्षा कारणहरूका लागि मात्र, यो यसको लायक छ। वास्तवमा, गोपनीयता नेटवर्कमा एक अधिकार हो जुन हरेक दिन ठूला निगमहरूले उल्लङ्घन गरिरहेको छ। VPN को साथ तपाईले यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो जे भए पनि, त्यहाँ अन्य पनि छन् तपाईलाई VPN चाहिने कारणहरू:
SARS-CoV-2: महामारीले समाजलाई परिवर्तन गरेको छ र कार्यस्थलमा पनि धेरै तरिकामा अभिनय गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ। अब त्यहाँ धेरै धेरै कम्पनीहरू र फ्रीलान्सरहरू teleworking छन्। यसमा जडान गर्न (BYOD हेर्नुहोस्) र तपाईंको गृह नेटवर्क प्रयोग गर्न तपाईंको आफ्नै यन्त्रहरू प्रयोग गर्न समावेश छ। धेरै कम्पनीहरूले संवेदनशील ग्राहक डेटा (कर डेटा, निजी फोटोहरू, बौद्धिक सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित जानकारी, चिकित्सा डेटा, ...) ह्यान्डल गर्छन् र VPN बिना तिनीहरू अनधिकृत तेस्रो पक्षहरूद्वारा चुहावट वा अवरोध हुने जोखिममा पर्छन्।
आफ्नो ब्राउजिङ डाटा सुरक्षित गर्नुहोस्: VPN सँग तपाइँसँग सुरक्षाको अतिरिक्त तह छ जुन मैले अघिल्लो बिन्दुमा उल्लेख गरें। यो विशेष गरी अत्यावश्यक हुन्छ जब तपाइँ सार्वजनिक वा असुरक्षित WiFi जडानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ निश्चित बैंकिङ सेवाहरू, इत्यादि पहुँच गर्नको लागि, अरूले पासवर्डहरू र अन्य प्रकारका प्रमाणहरू वा डेटा प्रविष्टि गर्न सक्षम नभएको।
बाइपास इन्टरनेट सेन्सरशिप: यदि तपाइँ तपाइँको भौगोलिक क्षेत्रमा उपलब्ध नभएको सेवा वा एप भेट्नुभयो भने, VPN मार्फत तपाइँ अर्को देशबाट IP प्राप्त गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। केही अनलाइन च्यानलहरू हेर्न, निश्चित स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro,...) मा उपलब्ध नभएको सामग्री पहुँच गर्न र Google Play, App Store, आदि आदि
P2P र टोरेन्ट डाउनलोडहरू: Torrent वा P2P नेटवर्कहरू द्वारा सामग्री डाउनलोड गर्न, अन्य वेबसाइटहरू बीच पाइरेटेड वा गैरकानूनी सामग्री डाउनलोड गर्न, तपाईंले VPN मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझ अज्ञात तरिकामा गर्न र ISP लाई यस गतिविधिको बारेमा सचेत हुन सक्दैन। यद्यपि यो गैरकानूनी हो र तपाईले यो आफ्नै जोखिममा गर्नुहुनेछ ...
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, VPN को अनुप्रयोगहरू जान्छ साधारण सुरक्षा भन्दा बाहिर...
सबै भन्दा राम्रो VPN छनौट गर्न मलाई के थाहा छ?
त्यहाँ केहि छन् प्राविधिक विवरणहरू तपाईंले नजर राख्नु पर्छ विशेष गरी जब तपाइँ केहि VPN सेवाहरू तुलना गर्दै हुनुहुन्छ जुन बीचमा तपाइँलाई शंका छ। तिनीहरू सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्न एक राम्रो सूचक हुन सक्छ र यदि यो तपाइँको आवश्यकताहरु लाई राम्रो संग सूट गर्दछ।
सर्भर र IP को संख्या
NordVPN एईएस-256 छिटो 59 देशहरु बाट6एक साथ प्रचारहरू
CyberGhost एईएस-256 छिटो 90 देशहरु बाट7एक साथ सुरक्षा
Surfshark एईएस-256 छिटो 61 देशहरु बाट असीमित मूल्य
ExpressVPN एईएस-256 यो धेरै राम्रो थियो 94 देशहरु बाट5एक साथ सेवाको गुणस्तर
ZenMate एईएस-256 यो धेरै राम्रो थियो 74 देशहरु बाट असीमित
हटस्पट शील्ड एईएस-256 छिटो 80 देशहरु बाट5यन्त्रहरू गति
TunnelBear एईएस-256 यो धेरै राम्रो थियो 22 देशहरु बाट5यन्त्रहरू प्राविधिक सेवा
मेरो गधा लुकाउनुहोस्! एईएस-256 छिटो 190 देशहरु बाट 10 एक साथ P2P र टोरेन्ट डाउनलोडहरूको लागि धेरै राम्रो
ProtonVPN एईएस-256 यो धेरै राम्रो थियो 46 देशहरु बाट 10 एक साथ Netflix को साथ प्रयोगको लागि आदर्श
निजी वीपीएन एईएस-256 यो धेरै राम्रो थियो 56 देशहरु बाट6एक साथ परिवारहरूको लागि राम्रो विकल्प
केहि VPN सेवाहरूमा धेरै देशहरूमा फैलिएको सर्भरहरूको ठूलो संख्या छ, जुन स्पष्ट फाइदा हुनेछ। थप रूपमा, केहीले तपाईंलाई ए फरक आईपी यादृच्छिक, तर अन्य सेवाहरू अगाडि जानुहोस् र तपाईंलाई उक्त IP को उत्पत्ति छनौट गर्न दिनुहोस्।
यो को लागी धेरै रोचक छ प्रतिबन्धित सेवा वा सामग्री। उदाहरणका लागि, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं स्वीडेनमा मात्र उपलब्ध सेवा पहुँच गर्न चाहनुहुन्छ। यी VPN हरू मध्ये एकको साथ तपाईंले स्वीडिश आईपी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ मानौं तपाईं थप एक स्विडेन हुनुहुन्छ ...
यो को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा मध्ये एक हो ला seguridad सेवाबाट। यसले कार्यसम्पादनमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। जाहिर छ, जति सुरक्षित हुन्छ उति धेरै गति तपाईले गुमाउनुहुनेछ, यद्यपि केहि गुणस्तर VPN सेवाहरूले केही प्रविधिहरू मार्फत व्यवस्थित गरेका छन् ताकि यो मामला होइन र तिनीहरूले धेरै राम्रो गति र सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन्।
जब तपाइँ VPN छान्नुहुन्छ, तपाइँले एक बलियो ईन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्मको साथ छनौट गर्नुपर्छ जसमा कुनै ज्ञात कमजोरीहरू छैनन्। ती मध्ये एक एल्गोरिदम AES-256 होजुन एक महान विकल्प हो। वास्तवमा, धेरै भुक्तानी सेवाहरूले सैन्य-ग्रेड सुरक्षाको लागि रोज्छन्, जुन उच्चतम उपलब्ध मध्ये हो।
इन्क्रिप्शनको अतिरिक्त, केही भुक्तानी सेवाहरूसँग उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि अतिरिक्त सुरक्षा प्रविधि वा उपायहरू छन्। तर जस्तोसुकै होस्, SHA-1, MD4, र MD5 जस्ता असुरक्षित एल्गोरिदमहरूबाट बच्नुहोस् जसको उल्लंघन भएको छ ।
र याद गर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै 100% सुरक्षित प्रणाली छैन। सबैभन्दा खतरनाक कुरा तपाई अभेद्य हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु हो। वास्तवमा, केही cybercriminals तिनीहरूले केही प्रकारको जोखिम वा अन्य जालसाजी विधिहरू जस्तै कि चोरीको फाइदा उठाएर यी जडानहरू उल्लङ्घन गर्न सक्षम भएका छन्।
यदि तपाइँ VPN ले तपाइँको डिप्रेस गर्न चाहनुहुन्न भने यो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डेटा हो नेटवर्क गति उल्लेखनीय रूपमा। तसर्थ, तपाईंले सधैं राम्रो गति संग सेवाहरू छनोट गर्नुपर्छ। हालका धेरै सेवाहरूले एकदम उच्च गतिमा सेवाहरू प्रदान गर्छन्, त्यसैले यो धेरै समस्या हुनेछैन, विशेष गरी यदि तपाईंले द्रुत जडान (ADSL, फाइबर अप्टिक्स,...) प्रयोग गर्नुहुन्छ भने।
गोपनीयता र गुमनाम
म सञ्जाललाई होइन, तर VPN सेवा प्रदायकले आफैंले भण्डारण गर्न सक्ने डेटालाई संकेत गरिरहेको छु। मैले पहिले उल्लेख गरेझैं, डाटा ISP को सर्भरहरू मार्फत पारित हुनेछैन, तर यो ती मार्फत जान्छ VPN प्रदायक.
केही प्रदायकहरू लग डाटा बचत गर्नुहोस् जस्तै तपाईंको नाम, भुक्तानी विवरण, तपाईंको वास्तविक आईपी, आदि। डेटा जसले तपाईंलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यो सिफारिस गरिएको छ, त्यसैले तपाईंले यी प्रदायकहरूले यो डेटा बचत गर्नुहुन्छ वा गर्दैन भन्ने बारे राम्रो छाप पढ्नु पर्छ। तिनीहरूलाई राख्नेहरूदेखि सावधान रहनुहोस् र सधैँ कम रेकर्डहरू भण्डारण गर्नेहरू छनौट गर्नुहोस्।
केही नि:शुल्क VPN सेवाहरूको अभाव छ प्राविधिक वा ग्राहक सेवा वा एकदम गरीब छ। भुक्तान सेवाहरूको मामलामा, यो सामान्यतया केहि राम्रो र 24/7 (24 घण्टा र7दिन एक हप्ता) हो, तर यो सबै अवस्थामा समान छैन।
केही सेवाहरूले मात्र ध्यान दिन्छन् अंग्रेजीमा, अरूसँग पनि यो स्पेनिशमा हुनेछ। तिनीहरू सामान्यतया फोन कल र इमेल मार्फत हुन्छन्, र केहिसँग तपाइँका प्रश्नहरूको जवाफ दिन वा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरू समाधान गर्न लाइभ च्याट पनि हुन्छ।
समर्थन वा प्लेटफार्महरू
नि: शुल्क VPN सेवाहरूसँग केही कम समर्थन छ, तर धेरै जसो भुक्तानी गरिएकाहरूलाई समर्थित प्लेटफर्महरूको सन्दर्भमा ठूलो समर्थन छ। यी सेवाहरूमा ग्राहक कार्यक्रमहरू छन् जुन विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमहरूमा स्थापना गर्न सकिन्छ जस्तै Windows, macOS, Linux, Android, iOS, आदि कतिपयले यसलाई निश्चित स्मार्ट टिभीहरूमा र ब्राउजरहरूमा एड-अनहरू मार्फत गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंले घर वा काममा प्रयोग गर्ने अपरेटिङ सिस्टमहरूको प्रकारलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् र सधैं VPN प्रदायक चयन गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ। आधिकारिक ग्राहक समर्थित.
ती क्लाइन्टहरू जुन मैले अघिल्लो खण्डमा कुरा गरिरहेको छु तिनीहरूसँग ग्राफिकल इन्टरफेस छ जुन धेरै वा कम हुन सक्छ मैत्री। तिनीहरू सामान्यतया एकदम सरल हुन्छन् र तपाइँलाई VPN खोल्न र बन्द गर्न वा यसमा निश्चित सेटिङहरू बनाउन कुनै कम्प्युटर सीपहरू आवश्यक पर्दैन।
यो सामान्यतया VPN क्लाइन्ट चलाउने जत्तिकै सरल छ र एउटा बटन थिच्नुहोस् ताकि सेवा सक्रिय हुन्छ र यसको "जादू" गर्न थाल्छ।
सशुल्क VPN सेवाहरूमा तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्छ सदस्यता तिर्न धेरै तरिकाहरू। यी भुक्तानी विधिहरू धेरै हुन सक्छन्:
क्रेडिट कार्ड: यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सहज र सामान्य छ।
PayPal: केही प्लेटफर्महरूले यस सुरक्षित प्लेटफर्म मार्फत भुक्तानी पनि स्वीकार गर्छन् जहाँ तपाईंलाई आफ्नो इमेल मात्र चाहिन्छ।
एप स्टोरहरू: मोबाइल प्लेटफर्महरूका लागि केही VPNहरूले Google Play, App Store, आदि जस्ता मोबाइल प्लेटफर्महरूको एप स्टोरहरूको भुक्तानी सेवाहरू मार्फत भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्छ।
क्राइप्टोकरन्सीहरू: क्रिप्टोकरेन्सीहरूले पूर्ण रूपमा बेनामी भुक्तानीहरूलाई अनुमति दिन्छ, जस्तै कि बिटकोइनसँग गरिएको। धेरै VPN प्रदायकहरूले यस प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सी भुक्तानीलाई समर्थन गर्छन्।
अरूलाई: कतिपयले अन्य विभिन्न विधिहरूलाई पनि समर्थन गर्छन्।
सायद शब्दले घण्टी बज्दैन DMCA, तर यो संयुक्त राज्यको प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण कानूनलाई जनाउने शब्द हो। यस कानूनले चलचित्र, संगीत, सफ्टवेयर, पुस्तकहरू, आदि जस्ता सबै प्रकारका सामग्रीहरूलाई पाइरेसी विरुद्ध संरक्षण गर्दछ।
र यो VPN सँग के गर्नु पर्छ? राम्रो सरल छ, केहि VPN प्रदायकहरूको मुख्यालय देशहरूमा छ जहाँ कानूनहरू छन् जुन संयुक्त राज्यबाट अनुरोधहरूको जवाफ दिने विचार गर्दैनन् जब केही धोखाधडी गतिविधिहरू गरिन्छ। अर्थात्, तिनीहरू भित्र छन् कानूनी आश्रयस्थल यदि डेटा न्याय गर्न अनुरोध गरिएको थियो भने तिनीहरूका ग्राहकहरूलाई सुरक्षित गर्दछ।
तर सबै VPN सेवाहरू यस प्रकारको प्रमोदवनबाट यी कानूनहरू बाहिर काम गर्दैनन्, केही क्षेत्रहरूमा छन् जहाँ तिनीहरूले गर्छन् ती अनुरोधहरू समायोजन गरिनेछ।। त्यसोभए यदि तपाईंले आफ्नो VPN आपराधिक गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि, यस ब्लगबाट हामी धोखाधडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दैनौं ...
1 शीर्ष 10 VPN हरू
2.0.0.1 यसको प्रचार को लागी बाहिर खडा
4.0.0.1 यसको मूल्यको लागि बाहिर खडा छ
5.0.0.1 यसको सेवाको गुणस्तरको लागि बाहिर खडा छ
6.0.0.1 यसको गुणस्तर-मूल्यको लागि बाहिर खडा छ
7 हटस्पट शील्ड
7.0.0.1 यसको गति को लागी प्रख्यात
8.0.0.1 यसको प्राविधिक सेवाको लागि बाहिर खडा छ
9 मेरो गधा लुकाउनुहोस्!
9.0.0.1 P2P र Torrent को लागी धेरै राम्रो
10.0.0.1 Netflix को साथ प्रयोगको लागि आदर्श
11 निजी वीपीएन
11.0.0.1 परिवारहरूको लागि राम्रो विकल्प
12 VPN बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा
12.1 VPN के हो?
12.2 नि: शुल्क बनाम भुक्तान
13 हाम्रो मनपर्ने VPN हरू
13.1 तेस्रो-पार्टी VPN वा तपाईंको आफ्नै?
13.2 के यो VPN राउटर किन्नको लागि राम्रो विकल्प हो?
13.3 VPN प्रयोग गर्ने फाइदाहरू
13.4 VPN को बेफाइदाहरू
13.5 मलाई VPN किन चाहिन्छ?
14.0.0.1 यसको प्रचार को लागी बाहिर खडा
15 सबै भन्दा राम्रो VPN छनौट गर्न मलाई के थाहा छ?
15.0.5 नमस्ते VPN
15.0.6 हटस्पट शील्ड
15.0.8 निजी वीपीएन
15.0.12 VPN छुनुहोस्
15.1 सर्भर र IP को संख्या
15.2 ईन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म
15.4 गोपनीयता र गुमनाम
15.5 प्राविधिक समर्थन
15.6 समर्थन वा प्लेटफार्महरू
15.7 मैत्री GUI
15.8 भुक्तानी विधिहरू
15.9 DMCA अनुरोधहरू